काँग्रेस नेताले दलित महिलालाई यस्तो बनाए, मिलापत्र गर्न पीडितलाई दबाब – Sunaulo Nepal TV
काठमाडौ । राजनीतिक पार्टीका नेता गाउँका लागि एक अभिभावक हुन् । तर जनप्रतिनिधि भैसकेका नेताले महिला माथि यस्तो ब्यवहार गर्लान् कसैले कल्पना गर्न सकिन्न । तर अझै आफै गल्ती गर्ने उल्टै महिलाका परिवारलाई मिल्न दवाव दिने ? यस्ता पनि नेता हुन्छन् ? भोजपुर, अरुण गाउँपालिका वडा न ६ मा दलित महिला माथि नेपाली काँग्रेसका पूर्व वडा सभापति सोमकुमार राईले निर्घात कु’ट’पिट गरे । घाइते अवस्थाकी उनको उपचार भइरहेको छ ।
तर महिलालाई न्याय दिनु त कता हो कता, महिलाकै परिवारलाई मिल्न दवाव आइरहेको छ । आफ्नो कस्मेटिक पसलमा एक्लै भएको बेला साबित्रा बराइली माथि घटना भएको हो । पसलमा कोही नभएको मौका पारी मुक्काले आँखामा र शरीरमा प्र हार गरेका थिए । छिमेकी घटनाको प्रत्यक्षदर्शी हुन् । घटना पछि राईलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको थियो ।
पीडित बराइलीलाई स्थानीय क्लिनिकमा उपचार सम्भव नभए पछि उपचारको लागि एम्बुलेन्समा धरानको विजयपुर अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा उपचार जारी छ । दलित भन्दै उनी माथि दुब्र्यवहार भएको हो । जब म मेरो श्रीमती सँग छैन भन्ने उनलाई थाहा भयो पसलमै आएर जाइ लागे घाइते अवस्थाकी उनले भनिन् ।
शरीरको सबेदनशिल अङ्गमा समेत हातपात गरेकाले फरक ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने महिलाका श्रीमानको माग छ ।तर गाउँकै वडा अध्यक्ष र मेयरले यो सामान्य घटना हो भन्दै मिल्न भनिरहेको महिलाका परिवारका सदस्यले बताएका छन् । गाउ घरको सानातिना यस्ता घटनालाई बाहिर ल्याउन हुँदैन गाउँमै मिल्नु पर्छ भन्दै मिलापत्र गर्न दबाब दिएको महिलाका श्रीमान् बताउँछन् ।
Previous ७० वर्षे उमेर हदले ओली फेरी अध्यक्ष बन्न पाउलान् ? यस्तो छ ब्यवस्था
Next इन्टरनेटको तार काट्ने निर्णयबाट पछि हटे कुलमान,(सहि कि गलत )